Ogaden News Agency (ONA) – Safiirka Maraykanka Ee Addis Ababa oo Cambaareeyay Dhaqanka TPLF.
Safiirka Maraykanka Ee Addis Ababa oo Cambaareeyay Dhaqanka TPLF.
Safiirka wadanka Maraykanka ee magaalada Addis Ababa Ambassador Michael Raynor oo warfidiyeenka lahadlay ayaa sheegay in dowladiisu ay aad uga walaacsan tahay dhaqanka qalafsan ee kooxda TPLF iyo shuruucda kala gadisan ee dalka lagu soo rogay.
Safiirka oo waraysi siiyay ideecada VOA ayaa sheegay in dowlada Maraykanku ay aad uga niyad jabsan tahay sharciga ladagaalanka argagixisada ee laga hirgaliyay wadanka Itoobiya, wuxuuna safiirku sheegay in dowladiisu ay xukuumada wayaanaha kala hadashay sharcigan.
Sidoo kale safiirka ayaa sheegay in dowlada Maraykanku ay aad uga walaacday sida ay xukuumada wayaanuhu umaaraysay xaalada colaadeed ee kataagan meelo badan oo Itoobiya ah gaar ahaan xuduuda udhaxaysa Soomaalida iyo Oromada oo ay colaad ka aloosantahay.
Safiirka ayaa sheegay in ay dagaaladaas kudhinteen dad aad ubadan o shacab ah iyo kuwo katirsan maleeshiyaadka la adeegsado ee ushaqeeya maamulada Soomaalida iyo Oromada, sidoo kale safiirka ayaa sheegay in ay hanti badan ku baaba’day dagaaladaas.
Safiirka ayaa sheegay in dowladiisu ay xukuumada wayaanaha kala hadashay sidii colaadahaas loodamin lahaa iyo sidii ciidamadoodu ay ubadbaadin lahaayeen dadka shacabka ah ee ay sida ula kaca ah ulaynayaan.
Sharciga cusub ee argagaxiso ladagaalanka ayaa kooxda TPLF iyo cawaanta ay ku adeegato siinaya awood dheeraad ah, wuxuuna sharcigu ciidamada u ogolaanayaa in ay dadka dilaan maxkamad la’aan.